Mampitsahatra ny Tranokalan’ny Mpanivan’ny Fanjakana Rosiana Ireo Mpiady Anaty Akata Nomerika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jona 2017 12:52 GMT
Raha tapaka ny 3 Jona tao Rosia ny fahafahana miditra tamin'ny fitaovana fandefasana hafatra Telegram, fanindroany izay tao anatin'ny herinandro latsaka, nanahy ireo olona sasany hoe ireo manampahefanam-panjakana no nibahana ilay sehatra. Nahazo faneriterena tamin'ny Roskomnadzor, ilay mpanivan'ny fanjakana, ny Telegram, mba hanaraka ilay lalàna iray mangataka an'ireo tolotra amin'ny Aterineto mba hampita ny angon-drakitry ny mpampiasa azy ary hisoratra anarana ao amin'ny governemanta tato anatin'ny volana maromaro.
Fa sambany tamin'ity indray mitoraka ity, tsy ny Rozkomnadzor no meloka. Fa kosa, niharan'ny hetsiky fampielezankevitry ny mpiady anaty akata nataon'ny dymoff.space, sehatra izay voabahana any Rosia, ny Telegram. Noho ny tsy fanjariana tao firaketan'ny Roskomnadzor ireo vohikala voasakana, afaka nanova ireo lamina ara-teknika ny dymoff.space ary nanova ireo adiresy IP an'ireo vohikala hafa ho toy ny azy.
Mampahatsiahy ireo ezaka mafy maro nanoherana ilay mpanivan'ny fanjakana taorian'ny fanapahankeviny hibahana ny bilaogin'i Alexey Navalny ny taona 2014, ireo fanafihana ireo. Namintina ireo ezaka tamin'izany fotoana izany i Andrey Tselikov ao amin'ny RuNet Echo:
Ho valin-kafatra, mpamatsy maro no nanomboka nanao fanamarinana an-tànana ireo adiresy IP mba hialàna amin'ny sazy. Araka an'i Filipp Kulin, ny tale jeneralin'ny mpampiantrano diphost.ru, mahatonga ireo mpamatsy manampy tsy nahy ireo adiresy IP ao anatin'ireo lisitry ny voabahany io fanamarinana an-tànana io.
Tamin'io fanafihana vao haingana indrindra io, nampidirin'ny dymoff.space ho ao anatin'ny fametrahany DNS ny adiresy IP an'ireo vohikalan'ny Channel One tantanan'ny fanjakana ao Rosia, ireo vohikala media sosialy Odnoklassniki sy VKontakte, NTV.ru, Booking.com, Facebook, Russian Railways, Mail.ru, ary vohikala hafa maro, na dia tsy tapaka tanteraka aza ny fidirana tamin'ny ankamaroan'ireo vohikala satria izy ireo mampiasa adiresy IP maro.
Tsy ny Dymoff.space ihany no vohikala voabahana namaly bontana tato ho ato. Ny Alakamisy 1 Jona, Dmitry Khomak, mpanorina ny Lurkmore, ilay “Wikipedia mpanadrohadro,” dia nibitsika sarinà taratasy avy tamin'ny Roskomnadzor ho an'ireo ISPs, nangataka ny hanesorana ao anatin'ny lisitra mainty ireo adiresy IP an'ny VKontakte sy Yandex. Ireo adiresy IP-n'izy ireo moa, toa natsofok'ireo sehatra voabahana vao haingan'ny Roskomnadzor koa.